ကုန်အမှတ်တံဆိပ် ၁၂ ခု - သင်ဘယ်ဟာလဲ။ | Martech Zone
အမှတ်တံဆိပ် ၁၂ ခု - သင်ဘယ်ဟာလဲ။
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 24, 2017 ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, မေလ 24, 2017 Deb Gabor
ငါတို့အားလုံးသစ္စာရှိရှိလိုက်လျှောက်ချင်ကြတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပရိသတ်နှင့်ချိတ်ဆက်ကာသူတို့၏ထုတ်ကုန်ကိုသူတို့၏ဘ ၀ ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုအဖြစ်ပြောင်းလဲစေမည့်ထိုမှော်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအစီအစဉ်ကိုအစဉ်မပြတ်ရှာဖွေနေသည်။ ကျနော်တို့မကြာခဏနားလည်သဘောပေါက်ကြဘူးသောဆက်သွယ်မှုဆက်ဆံရေးဖြစ်ပါတယ်။ သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းရှင်းလင်းစွာမသိပါကမည်သူကမျှသင့်ကိုစိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏အမှတ်တံဆိပ်သည်မည်သူမည်ဝါဖြစ်သည်၊ သင်၏ဖောက်သည်များနှင့်မည်သို့စတင်ဆက်ဆံသင့်သည်ကိုသင်နားလည်ရန်အရေးကြီးသည်။
အခြေခံအထောက်အထား (၁၂) ခုရှိသည် ရှေးဟောင်းသုတေသန- အမှတ်တံဆိပ်ကယူဆနိုင်သည် သင်မည်သည့်နေရာတွင်နေထိုင်သည်ကိုနားလည်ရန်ကူညီရန် ၁၂ ခုလုံးကိုကျွန်ုပ်အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။
မာဂုပညာရှိကအိပ်မက်တွေအကောင်အထည်ပေါ်အောင်လုပ်ပေး အဆိုပါ Magician ပညတ်အားလုံးရူပါရုံကိုအကြောင်းပါ။ Magician အမှတ်တံဆိပ်များသည်သင့်ကိုပိုမိုကောင်းသောသွားတိုက်တံသို့မဟုတ်သင့်အိမ်ကိုသန့်ရှင်းစွာထိန်းသိမ်းရန်မကူညီပေးပါ။ သင်၏အိပ်မက်များကိုအသက်ဝင်စေနိုင်သည်။ သူတို့ကမ်းလှမ်းတာကဘယ်သူမှမအောင်မြင်နိုင်တဲ့ကြီးမားတဲ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုပါ။ တစ် ဦး ကော်ဆရာတစ်ယောက်ကစကြဝuniverseာ၏အခြေခံများနှင့်အလွန်ကိုက်ညီသောကြောင့်မဖြစ်နိုင်ရာကိုဖန်တီးနိုင်သည်။ ဒစ္စနေးဟာပြီးပြည့်စုံတဲ့မှော်ဆရာတစ်ယောက်ပါ။ ဒစ္စနေးသည်အခြေခံအားဖြင့်မီဒီယာကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်အခြားမည်သည့်အရာများနှင့်မတူသည်။ သူတို့ကတစ် ဦး အသွင်ပြောင်းအတွေ့အကြုံကိုဆက်ကပ်။ သူတို့ဟာသူတို့ရဲ့အမြင်အာရုံရဲ့ကြီးကျယ်ခမ်းနားမှုကြောင့်သူတို့ကိုယ်ပိုင်အမျိုးအစားထဲမှာရှိနေတယ်။ တစ် ဦး တည်ဆောက်နိုင်သည့်အခြားအမှတ်တံဆိပ်ဆိုပါစို့ မှော်နိုင်ငံတော် သို့မဟုတ်တစ် ဒစ္စနီကမ္ဘာ.
Sage ကအမှန်တရားကိုအမြဲရှာဖွေနေသည် - ပညာရှိဖို့အတွက်ဉာဏ်ပညာကအောင်မြင်မှုရဲ့သော့ချက်ဖြစ်တယ်။ ကျန်တဲ့အရာအားလုံးဟာဗဟုသုတလိုက်စားခြင်းရဲ့ဒုတိယအဆင့်ပဲ။ တစ် ဦး ကပညာရှိအမှတ်တံဆိပ်နွေးခြင်းနှင့်အေးဆေးတည်ငြိမ်ခံစားရမည်မဟုတ်ပါ။ သူတို့သည် Disney ကဲ့သို့သောစိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောကမ္ဘာတွင်သင့်ကိုစွဲမက်စေမည်မဟုတ်ပါ။ အဲဒီအစားပညာရှိတစ် ဦး ကသူတို့ရဲ့တောက်ပမှုကိုပြခြင်းအားဖြင့်သင့်ရဲ့လေးစားမှုကိုမိန့်မှာထားတယ်။ ဟားဗတ်တက္ကသိုလ်သည်ပညာရှိတစ် ဦး ဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည်ကမ္ဘာပေါ်ရှိအလေးမြတ်ဆုံးတက္ကသိုလ်များထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ အမေရိကန်သမ္မတရှစ် ဦး၊ နိုဘယ်ဆုရှင် ၂၁ ဦး နှင့်မာ့ခ်ဇုကာဘတ်တို့ပါဝင်သောကျောင်းသားဟောင်းများစာရင်းတွင်ဟားဗတ်၏အမှတ်တံဆိပ်သည်အထူးချွန်ဆုံးဖြစ်သည်။
အပြစ်မဲ့သူကပျော်ရွှင်ချင်နေတယ်၊ အပြစ်မဲ့သောပရဒိသုတွင်ပိုင်ဆိုင်သည်။ လူတိုင်းသည်အပြစ်ကင်းသောလောကတွင်လွတ်လပ်ပြီးသီလနှင့်ပျော်ရွှင်ကြသည်။ အပြစ်မဲ့သောကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်သင့်အားကြော်ငြာနှင့်မည်သည့်အခါမျှအပြစ်မတင်ပါ၊ အဲဒီအစား, အပြစ်မဲ့အမှတ်တံဆိပ် Nostalgia: ပိုပြီးအစွမ်းထက်တစ်ခုခုနှင့်အတူသင်တို့ကိုဆွဲဆောင်ပါလိမ့်မယ်။ Orville Redenbacher သည်ရှေ့ပြေးပုံစံအပြစ်မဲ့ရှေးဟောင်းပုံစံဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သင့်အားကလေးဘဝအခွင့်အလမ်း၊ ပြောင်းဖူးပေါက်ပေါက်နှင့်ရောင်းချကြသည်။ သူတို့၏ mascot သည်အဖိုးအဖွားဖြစ်သည်။
OUTLAW သည်တော်လှန်ရေးကိုလိုလားသည်။ အဆိုပါရာဇဝတ်သားကြောက်လန့်ခြင်းမရှိ။ တရားမ ၀ င်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုဂရုမပြုဘဲသူတို့၏ဘဝကိုထိန်းချုပ်သည်။ နေ့ကလေးထိန်းဌာနတွင်ရေခဲမုန့်စားစားခြင်းကိုနှစ်သက်သောသင်၏အစိတ်အပိုင်းကိုအပြစ်မဲ့သောရှေးဟောင်းသုတေသနပညာရှင်တို့ထိသည့်နေရာတွင်အထက်တန်းကျောင်းတွင်အတန်းများဖြတ်တောက်သောသင်တို့၏ရာဇ ၀ တ်မှုတရားမ ၀ င်ပုံစံ အက်ပဲလ်ကဲ့သို့သောယဉ်ကျေးမှုကိုတည်ဆောက်ခြင်းသည်တရားမဝင်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်၏အဓိကရည်မှန်းချက်ဖြစ်သည်။ မိုနိုခရုမ်လူမျိုးများသည်သူတို့၏ဘ ၀ များအကောင်းဆုံးကခုန်ခဲ့သည့်ရှေးဟောင်း iPod ကြော်ငြာများကိုမှတ်မိပါသလား။ ဒီကြော်ငြာကလူအုပ်ထဲမှာရပ်ပြီးဒါမှမဟုတ်ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုကိုသွားဖို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး။ သင်ကိုယ်တိုင်ဖြစ်ရန်၊ ကြိုက်နှစ်သက်သောအခါတိုင်းကခုန်ရန်နှင့် Apple နှင့်ပြုလုပ်ရန်ပြောရန်သင့်အားပြောထားသည်။ အကယ်၍ အက်ပဲလ်တွင်အစွမ်းမရှိဟုသင်ယူဆပါကဤအချက်ကိုစဉ်းစားပါ။ လူတွေက Galaxy S7 ကိုလွှတ်ပြီးနာရီကိုတန်းစီခဲ့ကြတာလား။ မဟုတ်ပါ၊
JESTER သည်ယခုအချိန်တွင်အသက်ရှင်သည် - အဆိုပါ Jester အားလုံးပျော်စရာရှိခြင်းအကြောင်းပါ။ Jester အမှတ်တံဆိပ်သည်ရောဂါများကိုကုသနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်းသင်၏နေ့ကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်လုပ်ပေးနိုင်သည်။ ဟာသ၊ ဆူညံမှု၊ အနတ္တပင်လုံးလုံးသည်လူပြက်၏ကိရိယာတန်ဆာပလာများဖြစ်သည်။ jester အမှတ်တံဆိပ်၏ရည်မှန်းချက်သည်သင်၏နှလုံးသားကိုပျော်စရာကောင်းသောပျော်ရွှင်စွာဖြင့်ပြုံးစေရန်ဖြစ်သည်။ The Old Spice Man သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးကြော်ငြာစည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။ ယောက်ျားအချို့သည် hyper- ပုလ်အမှတ်တံဆိပ်ကိုကောင်းစွာတုံ့ပြန်ကြသည်။ အခြားယောက်ျားတွေကမကျင့်ဘူး ဤစူပါသူရဲကောင်းတံဆိပ်များမှဟာသတစ်ခုပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် Old Spice သည်နှစ်ဖက်စလုံးကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည်။
အချစ်ကသင့်ကိုသူတို့ဖြစ်စေချင်သည် - စိတ်အားထက်သန်မှု၊ ပျော်ရွှင်မှုနှင့်ကာမဂုဏ်ခံစားမှုတို့သည်ချစ်မြတ်နိုးရသူ၏သော့ချက်စာလုံးများဖြစ်သည်။ ချစ်မြတ်နိုးသောအမှတ်တံဆိပ်သည်သင်၏ဘ ၀ ၌ရင့်ကျက်သောအချိန်ကာလများနှင့်ပေါင်းသင်းစေလိုသည်။ မွေးနေ့နှင့်နှစ်ပတ်လည်များအတွက်သင်၏ထူးခြားသည့်အရာကိုအဘယ်အရာဝယ်ယူသနည်း။ အခွင့်အလမ်းတွေကိုသင်ချစ်မြတ်နိုးတဲ့အမှတ်တံဆိပ်မှဝယ်ယူနေဖြစ်ကြသည်။ Godiva ချောကလက်ကြော်ငြာများကိုစဉ်းစားပါ။ သူတို့သည်သင်၏ကျန်းမာရေး၊ သင်၏ငွေကြေး၊ သို့မဟုတ်သင်၏အနာဂတ်ကိုစဉ်းစားစေသလား။ Godiva ကသင့်ကိုသွေးဆောင်တယ်။ ၎င်းသည်၎င်း၏ကြွယ်ဝမှုနှင့် creaminess ကိုပြသသည်။ ချောကလက်သည်ဘဝ၏အကြီးမြတ်ဆုံးအလိုရှိမှု၌ပါဝင်ရန်သင့်အားဖိတ်ခေါ်ပါသည်။
EXPLORER သည်လွတ်မြောက်လိုသည်။ လွတ်လပ်မှုဆိုတာစူးစမ်းရှာဖွေသူအားလုံးကိုဂရုစိုက်သည်။ အခြားအိမ်များကိုတည်ဆောက်ရန်အခြားကုန်အမှတ်တံဆိပ်များကရှာဖွေသောကုန်အမှတ်တံဆိပ်များသည်သင့်အားအပြင်ဘက်သို့ခေါ်ဆောင်လိုသည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲ ထား၍ ပြင်ပကုန်အမှတ်တံဆိပ်များစွာသည်စူးစမ်းရှာဖွေသူရှေးဟောင်းသုတေသနပညာအတွက်သဘာဝကျသောအရာများဖြစ်သည်။ Subaru သည် Classic Explorer အမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်သည်။ သူတို့သည်ဇိမ်ခံကားများသို့မဟုတ်သက်သောင့်သက်သာရှိမှုအပေါ် အခြေခံ၍ သူတို့၏ကားများကိုမရောင်းကြပါ။ သူတို့က Subaru ပေးတဲ့လွတ်လပ်မှုကိုအလေးထားကြသည်။ Blizzard? ပြဿနာမရှိပါဘူး။ ဘယ်လိုအခြေအနေမျိုးပဲဖြစ်ဖြစ် Subaru ကသင်ဘယ်ကိုသွားနေတယ်ဆိုတာဆုံးဖြတ်ခွင့်ပေးတယ်။ မင်းကမင်းကို
အနန္တတန်ခိုးရှင်ကိုလိုချင်သည်။ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေကိုဇိမ်ခံပစ္စည်းတွေနဲ့သီးသန့်ခွဲထားတယ်။ မင်းတံဆိပ်တံဆိပ်သည်တံခါးစောင့်တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ အကယ်၍ ဖောက်သည်တစ် ဦး ကသူတို့ထံမှ ၀ ယ်ပါကသူတို့သည်အထက်တန်းလွှာပိုင်ရှင်များဖြစ်လာသည်။ အရည်အသွေးမြင့်ပြီးစျေးကြီးသည်ဟုယူမှတ်ခြင်းသည်မင်းသားအမှတ်တံဆိပ်အတွက်အရေးကြီးသည်။ လက်ဝတ်ရတနာများနှင့်အဆင့်မြင့်မော်တော်ယာဉ်များသည်အုပ်ချုပ်သူပုံစံအတွက်သဘာဝကျပါသည်။ Mercedes-Benz ကိုလေယာဉ်ပျက်ကျမှုအဆင့်သတ်မှတ်ချက်မှာသင်ဝယ်ပါသလား။ ဂက်စ်မိုင်အကွာအဝေးကော။ ထိုင်ခုံများအပူကင်းသလား။ သင်မတတ်နိုင်သောကြောင့်သင် Mercedes-Benz ကို ၀ ယ်သည်။ မင်းကားရပ်လိုက်တိုင်းစကားလုံးမပြောဘဲလူတွေဟာမင်းရဲ့အခြေအနေကိုနားလည်ကြလိမ့်မယ်။ ဒါကတိတ်တဆိတ်နားလည်သဘောပေါက်တန်ဖိုးကိုတစ်ခုအမှတ်တံဆိပ်ရောင်းချသည်အရာဖြစ်တယ်။
CAREGIVER သည်သင့်ကိုမွေးမြူလိုသည် - အဆိုပါစောင့်ရှောက်သူအကျိုးပြုသည်။ သူတို့သည်သင်နှင့်သင်ချစ်မြတ်နိုးရသူများအတွက်ထိုတွင်နေထိုင်လိုကြသည်။ စောင့်ရှောက်သူများကုန်အမှတ်တံဆိပ်အားလုံးသည်နွေးထွေးမှုနှင့်ယုံကြည်မှုနှင့်ဆိုင်သည်။ သင့်ကလေးများနှင့် ပတ်သက်၍ သင်မှီခိုနိုင်ပါသည်။ စောင့်ရှောက်သူများကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်သူတို့၏ပြိုင်ဆိုင်မှုကိုရိုက်ကူးသည့်ကြော်ငြာကိုတွေ့ရခဲသည်။ သူတို့ဟာထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်မှုရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲ။ ဂျွန်ဆင် & ဂျွန်ဆင်ရဲ့ tagline လိုင်းဖြစ်ပါတယ် ဂျွန်ဆင် & ဂျွန်ဆင်: တစ်မိသားစုကုမ္ပဏီ။ သင်ကမိသားစုများထက်ပိုမိုတာ ၀ န်ယူမည်မဟုတ်ပါ။ ဂျွန်ဆင်နှင့်ဂျွန်ဆင်ကြော်ငြာသည်သင်၏ကလေးများအားဂရုစိုက်ရန်သူတို့၏ထုတ်ကုန်များကမည်သို့ကူညီသည်ကိုအမြဲတမ်းအာရုံစိုက်သည်။ သူတို့ရဲ့ထုတ်ကုန်မိသားစုများကိုတည်ဆောက်ပုံ။ ဒါကစောင့်ရှောက်သူများရှေးဟောင်းအဘို့မုန့် -and ထောပတ်ဖြစ်ပါတယ်။
HERO သည်မိမိကိုယ်ကိုသက်သေပြလိုသည် - သူရဲကောင်းသည်အကောင်းဆုံးဖြစ်ခြင်းဖြင့်ကမ္ဘာကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည်။ သူရဲကောင်းတံဆိပ်သည်သင့်ကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းနှင့်မပတ်သက်ပါ။ သူတို့သည်သင့်ကိုစိန်ခေါ်လိုကြသည်။ အကယ်၍ သင်သည်ထိုအခမ်းအနားသို့တက်လိုလျှင်သူရဲကောင်း၏အကူအညီကိုသင်လိုအပ်လိမ့်မည်။ အမေရိကန်ကြည်းတပ်သည်သူရဲကောင်းဆန္ဒပြမှု၏အကောင်းဆုံးဥပမာဖြစ်သည်။ တပ်များသည်ရဟတ်ယာဉ်များမှခုန်ချခြင်း၊ လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းများမှတစ်ဆင့်ပြေးဆွဲခြင်းနှင့်တိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်ခြင်းတို့ဖြင့်သင်မြင်တွေ့ရသောစုဆောင်းရေးကြော်ငြာများကိုစဉ်းစားပါ။ ထိုအရာများကသင်၏တစ်နေ့တာနှင့်ဆင်တူသလော။ ဘယ်ဟုတ်မလဲ။ ဒါဟာမထင်ထားဘူး သင့်ကိုအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေဖို့ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားတာပါ ဖုန်းခေါ်ပါ နှင့်အမေရိကန်စစ်တပ် - သူရဲကောင်းအမှတ်တံဆိပ်နှင့်အတူပူးပေါင်းခြင်းဖြင့်အခါသမယမှထ။
ပုံမှန်ကောင်လေး / မိန်းကလေးကလိုချင်သည် - glitz သို့မဟုတ် glamour မရှိ၊ စိတ်ချရသောကုန်ပစ္စည်းတစ်ခုသာအလုပ်ကိုပြီးမြောက်အောင်လုပ်သည်။ ဤသည်မှာပုံမှန်ယောက်ျား / မိန်းကလေးအမှတ်တံဆိပ်များရောင်းချနေခြင်းဖြစ်သည်။ ရှေးဟောင်းပုံစံသည်လူတိုင်းကိုဆွဲဆောင်နိုင်သောဟန်ဆောင်မှုမှဝေးကွာသောအရာတစ်ခုကိုထောက်ပံ့ရန်အာရုံစိုက်သည်။ သင့်ကိုလူ ဦး ရေစာရင်းဇယားများနှင့်ကိုက်ညီသောထုတ်ကုန်တစ်ခုရှိရန်လိုသည်။ ပယ်ဖျက်ရန်မှာအခက်ခဲဆုံးပညတ်ဖြစ်သည်။ လူတိုင်းကော်ဖီသောက်ကြသည်။ လူတိုင်းမဟုတ်ဘဲမွေးကင်းစကလေးများ မှလွဲ၍ ကျန်လူ ဦး ရေစာရင်းများ။ ဒါက Folgers ကိုယောက်ျား / မိန်းကလေးတိုင်းအမှတ်တံဆိပ်ဖြစ်စေတယ်။ Folgers သည်တင်ပါးဆုံရိုးလူအုပ်ကိုစျေးမတင်ပါ။ သူတို့အရည်အသွေးမြင့်အော်ဂဲနစ်ကော်ဖီကိုဝါကြွားခြင်းမရှိကြပါ။ သူတို့ကရိုးရိုးရှင်းရှင်းထားတယ် -“ နိုးထဖို့အကောင်းဆုံးအပိုင်းကမင်းရဲ့ခွက်ဖလက်စ်ပဲ။ ” လူတိုင်းနိုးကြတယ်။ လူတိုင်း Folgers သောက်ကြသည်။
ဖန်တီးသူသည်ပြီးပြည့်စုံမှုကိုတောင့်တသည် - ဖန်တီးသူတစ် ဦး သည်ထုတ်လုပ်မှု၏ကုန်ကျစရိတ်နှင့်အရာ ၀ တ္ထုများပြုလုပ်ခြင်းကိုစိတ်မပူပါ။ ပြီးပြည့်စုံသောကုန်ပစ္စည်းကိုတည်ဆောက်ခြင်း၊ ဝိဇ္ဇာဆရာသည်အမြင်အာရုံနှင့်စိတ်ကူးစိတ်သန်းများကိုအလေးထားသော်လည်းဖန်တီးသူများသည်ကွဲပြားခြားနားကြသည်။ သူတို့သည်ကမ္ဘာ့မှော်များကိုသော့ဖွင့ ်၍ မဖြစ်နိုင်သည့်အရာများကိုမဖန်တီးနိုင်ခြင်းဖြစ်သည်။ သူတို့ကပြီးပြည့်စုံသောထုတ်ကုန်ဖန်တီးပါ။ Lego သည်ဖန်တီးသူနမူနာပုံစံ၏ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သူတို့ရဲ့ကြော်ငြာတစ်ခုမှာ Lego ဟာကမ္ဘာပေါ်မှာအကျော်ကြားဆုံးမြင်ကွင်းများကိုအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင်အသေးစိတ်ပြန်လည်ဖော်ပြခဲ့သည်။ သူတို့ကဆိုဒ်အသစ်တွေမဆောက်ခဲ့ဘူး၊ ပြီးတော့သင့်ရဲ့အိမ်ထဲမှာဆိုဒ်များကိုထည့်သွင်းတဲ့နည်းပညာအသစ်ကိုမဖန်တီးခဲ့ကြဘူး။ Lego သည်ဖြစ်နိုင်သမျှအရိုးရှင်းဆုံးနည်းပညာကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။ သူတို့ကဒီရိုးရှင်းမှုကိုယူပြီး၎င်းကို၎င်း၏အပြည့်စုံဆုံးအစွန်းရောက်မှုသို့တွန်းပို့လိုက်တယ်။ ဒါကဖန်တီးသူဖြစ်ခြင်းအကြောင်းပါ။
ဆယ်စုနှစ်ပေါင်းများစွာအတွေ့အကြုံများအရကုမ္ပဏီတိုင်းသည်သူတို့ယောက်ျားလေး / မိန်းကလေးများဖြစ်သည်ဟုယူဆသူတိုင်းစားပွဲပေါ်သို့လာကြသော်လည်း၊ ၉၉% သောကိစ္စများတွင်၎င်းတို့သည်မဟုတ်ပါ။ သင်၏ကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကိုအထူးဖြစ်စေသောကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်သင့်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့်မည်သို့အကောင်းဆုံးချိတ်ဆက်သည်ကိုအသေးစိတ်လေ့လာရန်မလွယ်ကူပါ။ သို့သော်မည်သည့်ပုံစံကိုအသုံးပြုသင့်သည်ကိုနားလည်ရန်သင်လုပ်နိုင်သောအရေးကြီးဆုံးအရာဖြစ်သည်။
Deb Gabor သည်စာရေးသူဖြစ်သည် ကုန်အမှတ်တံဆိပ်သည်လိင်ဖြစ်သည်။ သင်၏ဖောက်သည်များအားလုံးကိုချည်နှောင်ပြီးငရဲကိုမည်သည့်အရာမှမရောင်းပါနှင့်။ သူမသည် Sol Marketing ကိုတည်ထောင်သူဖြစ်ပြီး Dell၊ Microsoft နှင့် NBC Universal ကဲ့သို့သောနိုင်ငံတကာအိမ်ထောင်စုအမည်များမှသည် Allrecipes, Cheezburger, HomeAway နှင့် RetailMeNot ကဲ့သို့သောဒစ်ဂျစ်တယ်ဆုရှင်များ၊ အစောပိုင်းအဆင့်နည်းပညာနှင့်ဒီဂျစ်တယ်များအထိအဖွဲ့အစည်းများအတွက်ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မဟာဗျူဟာထိတွေ့ဆက်ဆံမှုကို ဦး ဆောင်ခဲ့သည်။ မီဒီယာ titans များ။